Chainmail short shirt yenhumbi dzokurwa, Foe yemunondo, Chainmail hauberk mufekitari wokutengesa - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Security > Marudi>Chainmail
Nhumbi dzokuzvidzivirira dzokuzvidzivirira dzinogadzirwa nezvindori zvakabatanidzwa. Uye rindo imwe neimwe yehembe yakabatanidzwa zvakasimba nemamwe makore mana uye haingadonwi. Kembe yacho, takagadzira, ine zvirongwa zvitsva zvakawanda: pasina maoko, maoko, maoko azere, hembe pfupi nehembe refu. Maererano nezvaunoda uye kushandisa zvinoshanda, unogona kusarudza chakanaka zvikurusa. Panguva imwe cheteyo, hembe yatakagadzirwa, ine unyanzvi hwokugadzira zvinhu zvakanaka uye hwakanyorera. Paunoribvisa, hauzova nezvinetso, kungofanira kungomera chiuno ndokuita kuti makwere akakubetsera.
Hembe yechainmail isina maoko
Nhumbi dzokuzvidzivirira muviri wose
L Material: carbon simbi, simbi risina simba, aluminium yakajeka, aluminium anodized, titanium, brass, mhangura, Bhuronga, nj.
L nzira yokubatanidza: riveting, butting and welding.
L Chain mutoo unobatanidzwa: European 4 mu1
Inyika yokurapa: nhengo yezinc, tsvuku, tsvina yemhangura.
I Sleeve mutoo: sleeves, sleeves pfupi, hafu sleeves, maoko azere.
Ine mashoko okuwedzera: diameter yenyaya neyokwayo inogona kuchinja.
SS mvura mvura yenhumbi dzokuzvidzivirira
Zvibvi zvemuvara wendara zvinhu zvinoita nhumbi dzokuzvidzivirira
I hembe yemabhiza yakaisvonaka. Nzvimbo imwe neimwe inosarudza usati wavunda uye mupoti imwe neimwe inobatanidzwa zvakasimba nemamwe makoreti mana kuti idzivise kuwa.Mavha
Ini akafuta uye akanaka kupfeka. Hembe inoitwa nealuminium yakarerwa zvikuru uye inopenya pamusoro. Panguva imwe cheteyo, nemhaka yokugadzira mitemo mitatu, hembe yeposi inogona kukodzera zvakakwana chipfuva chako.
Ine nhambo huru yokudzivirira. Hembe ine maoko akareba anogona kufukidza muviri wako.
I Rust nokudzivisa kwokuora. Mvura yehembe yeposi inogona kubviswa zinc kana kuti kubviswa zvitema izvo zvinogona kugovera mugero wedziviriro.
Kushanda uye kunoshongedza. Hembe yechainmail inogona kushandiswa kwete bedzi mukudzivirira asiwo mukuita.
Hembe ine zvinhu zvitsva zvakawanda nezvisarudzo zvakawanda zvinogona kugutsa zvinhu zvakawanda zvinoshanda.
I basa rokudzivirira. Hembe yechainmail inogona kudzivisa chipfuva, maoko uye makumbo okumusoro kukuvadzwa kweminondo, mapfumo, banga, zvombo, uye nharo, uchiri kugona kugovera zvinhu zvakazara uye zvakaenzana nokuda kwomuviri wako.
Basa rokuita. Nghembe yechainmail yakakurawo nokuda kwokutamba kwemabasa mapenyu, kubudiswa kwamashoko, kuratidza zvipfeko zvokupfeka, Zvipfeko zvombo, zvipfeko zveHalloween, cosplay, zvipfeko zvakanaka, zvipfeko zvemitambo, zvine
Ndi imwe basa. Hembe yechainmail inogonawo kushandiswa sezvipo nokuda kwavamwe, tsamba dzokushanda DIY, mitambo yakazara yokurwisa, Chisikwa chomunhu chakaparadzana, kana kuti dzimwe pfungwa dzipi nedzipi dzokusika.
Tevere:Kuchengeta michina yesimbi kwakawedzerwa
Taga: chainmail armor, chainmail shirt, foe of sword, chainmail hauberk, chainmail vest,
Betsero nezvinetso zvehembe yeChainmail iri muheme yenhumbi dzokuzvidzivirira
Zvingasarudza sei nhumbi dzokuzvidzivirira?
Mutoo unoenzaniswa nomutoo wechainmail
Shoko rakawanda rokuti mabhii namapakisi anoendeswa nechainmail hauberk
Tingava sei muvengi womuta wamapfupa?